RINGKE Laptop Stand Anti-Slide Smart Folding Portable Slim and Weightl – Gadget Pro Myanmar
RINGKE Laptop Stand Anti-Slide Smart Folding Portable Slim and Weightless Adhesive Stand for Laptop, iPad, Tablet, and More
Product SKU: RINGKE Laptop Stand
This product is now on 55% clearance sale. Product is NEW. Reason for clearance is to clear out the last few stock. Packaging may show more or less damage.
55% လျော့စျေးဖြင့် ဂိုဒေါင်ရှင်းရောင်းရန် သတ်မှတ်ထားသော ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းအသစ်ဖြစ်သည်။ ဂိုဒေါင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာမှ ထွက်လာသော အနည်းငယ်သော ပစ္စည်းအရေအတွက်ကို ဂိုဒေါင်ရှင်းရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ ပါကင်ဘူးခွံ အနည်းအများ စုတ်ပြဲမှုရှိသည်။
Laptopတွေ၊ Tablet တွေ၊ iPadတွေ၊ Kindleတွေအားလုံးနဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ထောက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပါးလွှာတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကြောင့် Laptopမှာတပ်ထားလိုက်ရင်တောင် တပ်ထားမှန်းမသိရအောင် ပေါ့ပါးပါတယ်။
Anti-Slip Protectionကြောင့် ချောကျမှာကိုလည်း စိတ်ပူစရာမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
အသုံးမလိုတဲ့အချိန်မှာလည်း ခေါက်ထားလို့ရပြီး ခေါက်ထားရင်တောင် ပါးပါးလေးပဲမို့ သယ်ယူရလွယ်ကူပါတယ်။
မှတ်ချက်- Standကိုတပ်ဆင်သည့်အချိန်တွေ အသုံးပြုမည့် Laptop,Tabletတို့တွင် ဖုန်မရှိရန် သေချာသုတ်ပြီးမှ တပ်ဆင်ပါရန်။